Andriamanitra dia tsy mitsahatra ny mitia - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > Ny fahasoavan'Andriamanitra > Andriamanitra tsy mitsahatra velively fitiavana
Inona no ratsy hafa noho ny fanodikodinana zavatra iray tany am-boalohany? Ny zavatra rehetra noforonin'olombelona, ​​anisan'izany isika olombelona dia tena tsara tokoa, saingy ny fanararaotana ny zavaboary izay miteraka faharatsiana izany. Misy izy satria mampiasa ny fahalalahana nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fomba diso isika hanalavirana ny tenantsika amin'Andriamanitra, ilay loharanon'ny maha-olombelona antsika fa tsy manatona Azy.
Midika ho inona ho antsika manokana izany? Izao fotsiny: Andriamanitra nahary antsika avy amin'ny halalin'ny fitiavany tsy misy fitiavan-tena, avy amin'ny famatsiana tsy manam-petra ny fahalavorariana sy ny heriny famoronana. Midika izany fa salama tsara sy salama tsara isika, tahaka ny nahariany antsika. Fa inona ny olantsika, ny fahotantsika sy ny lesoka ataontsika? Ireo rehetra ireo dia vokatry ny zava-misy fa nanalavitra an'Andriamanitra isika, fa mahita ny tenantsika ho loharanon'ny maha-izy antsika fa tsy Andriamanitra izay nanao antsika sy miaro ny fiainantsika.
Raha nivily tamin'Andriamanitra isika ary mandeha amin'ny lalana alehantsika, tsy lavitra ny fitiavany sy ny hatsaram-panahiny, dia tsy afaka mahita izay tena misy azy isika. Hitantsika ho mpitsara mampatahotra, olona tokony hatahorany, misy olona miandry ny handratra antsika, na hamaly faty amin'ny ratsy nataontsika. Tsy toy izany kosa Andriamanitra. Tsara foana izy ary tia antsika foana.
Tiany hahalala azy isika, hiaina ny fiadanany, ny fifaliany, ny fitiavany be dia be. Jesosy Mpamonjy antsika no endrik’Andriamanitra, ary mitondra ny zavatra rehetra amin’ny Teniny mahery Izy (Hebreo). 1,3). Nasehon’i Jesosy tamintsika fa momba antsika Andriamanitra, ary tia antsika izy na dia teo aza ny fiezahantsika adala handositra azy. Maniry mafy ny hibebahantsika sy hody any an-tranony ny Raintsika any an-danitra.
Jesosy dia nitantara tantaran'ny zanakalahy roa. Ny iray tamin'izy ireo dia toa ahy sy ianao. Te ho tonga ivon'izao rehetra izao izy ary hamorona ny tontolony manokana ho an'ny tenany. Noho izany dia nitaky ny antsasaky ny lova azony izy ary nihazakazaka araka izay azony atao, miaina mba hampifaliana fotsiny ny tenany. Saingy ny fanoloran-tenany hampifaly ny tenany sy hiaina ho an'ny tenany dia tsy nandeha. Arakaraka ny nampiasany ny volan'ny lovany ho an'ny tenany, no vao mainka nahatsapa izy ary nanjary nihanalefaka kokoa.
Avy amin'ny halalin'ny fiainany tsy niraharaha dia niverina tany amin'ny rainy sy ny tranony ny eritreriny. Nandritra ny fotoana fohy sy namirapiratra dia takany fa ny zavatra tena tadiaviny, ny zavatra rehetra tena ilainy, ny zavatra rehetra nahafinaritra azy sy sambatra dia tao an-trano niaraka tamin'ny rainy. Noho ny tanjaky ny fotoam-pahamarinana, tamin'ity fotoana tsy nifandray tamin'ny fon'ny rainy ity dia nandriatra ny tenany teo am-bavan'ny kisoa izy ary nanomboka nody. ny adala sy very saina ho lasa.
Fantatrao ny tohin’ny tantara – ao amin’ny Lioka 1 izany5. Tsy vitan’ny hoe nampiditra azy indray ny rainy, fa mbola lavitra ihany no nahita azy tonga; niandry fatratra ny zanany adala izy. Ary nihazakazaka nitsena azy izy, namihina azy, ary nandrotsaka azy tamin’ilay fitiavana efa nananany hatramin’izay. Lehibe tokoa ny hafaliany ka tsy maintsy nankalazaina.
Nisy rahalahy iray hafa, ny zokiny. Ilay nijanona niaraka tamin'ny rainy izay tsy nandositra ary tsy nanakorontana ny fiainany. Raha nahare ny fankalazana ity anadahy ity dia tezitra izy sady nanenina tamin'ny rahalahiny sy ny rainy ka tsy te hiditra ao anatiny. Saingy ny rainy dia nivoaka tao aminy ary noho izany fitiavana izany dia niresaka taminy ary nandatsaka azy tamim-pitiavana tsy manam-petra iray izay nananganany ny zanany ratsy fanahy.
Niodina farany ilay zokiny ary nandray anjara tamin'ny fankalazana? Tsy nilaza taminay i Jesosy. Nefa ny tantara dia milaza amintsika izay tokony ho fantatsika rehetra - Andriamanitra dia tsy mitsahatra tia antsika mihitsy. Manantena azy ny hiverenantsika sy hiverina aminy izy, ary tsy anontaniana na oviana na oviana hamela heloka sy hanaiky ary ho tia antsika satria Andriamanitra Raintsika Izy, izay fitiavana tsy manam-petra dia mitovy hatrany.
Fotoana tokony hampijanonana anao tsy hiala amin'Andriamanitra ary hiverina any amin'ny fonenany ianao? Nataony feno sy tanteraka Andriamanitra, fanehoana mahafinaritra amin'ny tontolon'ny hatsarany feno fitiavana sy ny herin'ny famoronana. Ary mbola. Mila mihodina isika ary mifandraika amin'ny Mpamorona, izay mbola tia antsika ankehitriny, tsy misy hafa amin'ny nitiavany antsika rehefa niantso antsika ho tonga izy.